NTFS Fitaovana tsy esorina. Avereno jerena ireo rakitra voafafa NTFS Aelin'ny.
DataNumen NTFS Undelete dia ny tsara indrindra fitaovana hamerenana ireo rakitra sy lahatahiry voafafa NTFS aelin'ny. Mampiasa teknolojia avo lenta izy io mba hijerena sy hahitana ireo rakitra sy lahatahiry voafafa, ary avy eo sitrana daholo izy ireo mba hamerenanao ny most angona manan-danja.
Fanamarihana: DataNumen NTFS Undelete dia freeware. Azonao atao ny misintona, mampiasa ary manaparitaka an-kalalahana azy.
4.90 / 5 (avy amin'ny vato 1,604)
Nahoana DataNumen NTFS Undelete?
Safidio ny Drives
Endri-javatra lehibe ao DataNumen NTFS Undelete v2.0
Fanohanana ny kinova rehetra an'ny NTFS endrika.
Fanohanana hamerenana ireo renirano mifandraika amin'ireo rakitra voafafa.
Tohano hamerenana ireo lahatahiry voafafa sy ny lahatahiry hierarchy miverina.
Tohano hanivanana sy handamina ireo rakitra sy lahatahiry voafafa arakaraka ny masontsivana isan-karazany.
mampiasa DataNumen NTFS Undelete hamafana ny fisie Files NTFS aelin'ny
Ianao namafa mandrakizay rakitra na lahatahiry avy amin'ny NTFS mandeha ho azy ny mpamily, na nesorinao ny fitoeram-bokatrao alohan'ny hitanao fa misy zavatra manan-danja ao. Inona no azonao atao?
Tsy misy ahiahy. DataNumen NTFS Undelete afaka manampy anao. Azonao atao ny mampiasa an'ity fitaovana mahery vaika ity hanapahana ireo kapila, hitadiavana ireo rakitra nesorina tsy nahy, hamerina azy ireo ary hahazo ny most miverina aminao ny angona sarobidy.
Start DataNumen NTFS Undelete. Ho hitanao ny "Start Magicien "pejy, izay hanoritra ireo lahasa lehibe natao nandritra ny fizotran'ny famoahana:
Tsindrio ny bokotra handehanana amin'ny dingana manaraka.
Fanamarihana: Alohan'ny hamerenana ireo rakitra voafafa NTFS mitondra fiara miaraka amin'ny DataNumen NTFS Undelete, tsara kokoa raha manakatona fampiharana hafa ianao.
Ao amin'ity pejy ity, ny drive rehetra amin'ny solo-sainao dia voatanisa, toy izao:
Ao amin'ny lisitra, afaka misafidy iray na maromaro ianao NTFS mitondra ny toerana tianao hijerena sy hamerenana ireo rakitra sy lahatahiry voafafa, avy eo kitiho ny bokotra handehanana amin'ny dingana manaraka.
Amin'ity pejy ity dia azonao atao ny mametraka ny safidy ho an'ny fizotran'ny scan:
ary tsindrio ny bokotra handehanana amin'ny dingana manaraka.
Ao amin'ity pejy ity, ny kapila nofidinao sy ny safidy napetrakao amin'ny fizotran'ny scan dia voatanisa avokoa ho anao hanamafisana:
Raha OK ny zava-drehetra dia tsindrio azafady ny bokotra mankany start ny fizotran'ny scan.
Eto amin'ity pejy ity, DataNumen NTFS Undelete Hizaha maso ny kapilao ary hikaroka rakitra sy lahatahiry azo sitrana:
dia hanondro ny fandrosoan'ny scan.
Aorian'ny fizotry ny scan, raha misy rakitra na folder voafafa azo averina, dia hahita boaty misy hafatra toy izao ianao:
Tsindrio ny bokotra "OK", avy eo handeha amin'ny pejy manaraka isika.
Ao afovoan'ity pejy ity dia voatanisa ao ireo lisitra voafafa rehetra izay hita fa azo averina mandritra ny fizotry ny scan teo aloha. Raha mamela ny "Scan for folder voafafa azo averina" ianao amin'ny safidy scan, dia voatanisa ao ihany koa ireo lahatahiry voafafa izay azo averina.
Ao amin'ny lisitra, azonao atao ny misafidy rakitra na lahatahiry iray na maromaro tianao ho sitrana, avy eo kitiho ny bokotra handehanana amin'ny dingana manaraka. Azonao atao ny manivana na mandahatra ny lisitra mba hahitanao haingana izay tadiavinao ary avy eo dia ataovy izay hisafidianana.
Amin'ity pejy ity dia azonao atao ny misafidy ny fampirimana output ho an'ireo rakitra sy lahatahiry tsy voafafa:
Ankoatr'izay, azonao atao ny mametraka safidy hafa fanarenana eto. Aorian'izay, azafady tsindrio ny bokotra handehanana amin'ny dingana manaraka.
Amin'ity pejy ity, ny fisie sy ny lahatahiry nofidinao mba ho sitrana, ary koa ny fampirimana fampivoarana sy ireo safidy napetrakao amin'ny fizotran'ny fanarenana dia voatanisa ho anao mba hanamafisana:
Raha OK ny zava-drehetra dia tsindrio azafady ny bokotra mankany start ny fizotry ny fanarenana.
Eto amin'ity pejy ity, DataNumen NTFS Undelete dia ho sitrana ireo rakitra sy lahatahiry nofidinao avy amin'ny kapila anao arak'ireo safidy fanarenana napetrakao, ary avoakany ao anaty fampirimana avoakanao izay notondroinao.
Aorian'ny fizotry ny fanarenana, raha misy rakitra na folder voafafa averina soa aman-tsara, dia hahita boaty hafatra toy izao ianao:
Ankehitriny ianao dia afaka manokatra ny lahatahiry famoahana ary miditra amin'ireo rakitra sy lahatahiry sitrana rehetra.
DataNumen NTFS Undelete 2.0 dia navoaka tamin'ny 16 septambra 2014
DataNumen NTFS Undelete 1.0 dia navoaka tamin'ny 16 Jolay 2009
Sitrana lost ary voafafa ireo rakitra ao anaty kapilao na kapila anao.